Blood Queen | Nkwụnye ego Ohere mepere na Phone Ebe E Si Nweta | Cha cha UK Online cha cha
Ị na-achọ ihe ụfọdụ Gothic egwu romance nke a oge? Echegbula, n'ihi na Blood Queen na-niile setịpụrụ na-ewe gị banyere maka ụfọdụ mara mma ahụmahụ. Iron Dog studio has come up with this and added some top-notch features and visuals to make your trip more enjoyable. Ọzọkwa, na gargoyle wilds na-aga na-ọkacha mmasị gị n'ihi na ha nwere ike na-agbasa ma jupụta multiple esi anwụde onye laa. Ọzọkwa, ị nwere ike Nkwụnye ego Ohere mepere na Phone Ebe E Si Nweta dị ka nke ọma.
Ugbu a Blood Queen ahapụ Ị ego Ohere mepere With Phone Ebe E Si Nweta
Ọ nwetara 5 esi anwụde ndokwa kpọmkwem 3 ahịrị tinyere 30 paylines. Ị pụrụ ịhụ na a moonlit eli ke ndabere na ụfọdụ egwu visuals.
The ala ụkpụrụ ndị na-emebu kaadị ụkpụrụ ebe elu-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya na-ji akara nke dị abụọ-na-ole. Ndị a bụ ndị a ọnụ ọgụgụ nke Van Hell na Queen onwe ya.
The gargoyle a kọwara dị ka anụ akara. Ọ bụrụ na ị kechioma nwere ya n'elu nke ọ bụla ukwu mgbe ọ tụlee ala na-atụgharị dum ukwu ọhịa. E nwere ihe abụọ chụsasịa ebe a nke bụ a Van Hell na ọbara Queen, ha ga-akpali ndị bonuses n'ihi na ị.
Nkwụnye ego Ohere mepere na Phone Ebe E Si Nweta na-amụba gị bonuses
Free spins feature nwere ike triggered site ọdịda atọ ma ọ bụ karịa chụsasịa. Ị ga-enweta 20 free spins maka ọdịda ha atọ, 30 anọ na 50 ise scatters.Then ị ga-jụrụ họrọ onye ọ bụla n'ime ihe abụọ ahụ nyere atụmatụ site na-ahọpụta ikposa akara.
The Van Hell akara ga-ewe gị ka Holy Water wilds. Ha ga-abịa maka anọ ọzọ free spins na mgbe ahụ ga-akwụsị. Ndị a wilds pụrụ ịkpali ekwesị ma ọ bụ ịgbasapụ. Ebe ọ bụ na ị na-ekwe Nkwụnye ego Ohere mepere na Phone Ebe E Si Nweta dị ka nke ọma na ọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na ị na eto elu ego.
Otú ọ dị, aga n'ihi ọbara Queen ga-enye gị Blood ọgwụ wilds.These nnọchianya mgbe jupụta ọ bụla otu n'ime nyere n'etiti esi anwụde. Ọ bụrụ na ha kụrụ na-esi anwụde mgbe ahụ, ha ga-ịgbanwee otu ukwu kwupụta n'aka ekpe. Ozugbo ha gafee niile na-esi anwụde, ha ga-apụ n'anya. na-emekarị, ị ga-esi multiple Blood potions maka otu free atụ ogho.
Nke a oghere e mere na mma creativity na-enye gị ohere nwere fun na a creepy gburugburu ebe obibi. Ọzọkwa, nnweta Nkwụnye ego Ohere mepere na Phone Ebe E Si Nweta na-eme ka ọ dịrị ya mfe na-egwu n'ebe ọ bụla na n'ebe nile.
mma ndụ casinos